Blog | Achọpụtara nke ọma
Ihe October 20, 2018
Ugwu ugwu ọdịda anyanwụ nke dị na North Carolina dị mfe na obodo ukwu dịka Atlanta, Charlotte, Raleigh. Ọtụtụ ndị bi ugbu a nwere ezumike ma ọ bụ ezumike nká ebe a. Ịga n'ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-agbapụ n'oké ọhịa ndị na-atụ egwu na ngwụsị izu bụ ihe a na-emekarị maka ndị bi n'obodo ukwu.
Ugwu WNC na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndụ ọ bụla a pụrụ ichetụ n'egwuregwu golf, ụgbọ mmiri ski na ọdọ mmiri, obodo dị na Asheville, na obodo nta ndị dị nso, ma ọ bụ ịbanye n'ime obodo naanị na 20 nkeji. Ịnwere ike ịgafe okporo ụzọ Appalachian, kwụọkwa ọtụtụ osimiri, ma ọ bụ kpụzie Blue Ridge Parkway, nanị ịkpọ aha ole na ole n'ime ọtụtụ ihe a na-eme n'èzí. Ọ bụrụ na ndị mmadu na-ele anya bụ ihe gị, ọ dịghị ebe ka mma karịa obodo Ashville! Nhọrọ ụlọ na-esi na ụlọ ndị dị mma, ụlọ ndị dịpụrụ adịpụ, ubi ugbo, osimiri na-alaghachi na ala dị oké ọnụ ahịa. A na-anọchi anya ọnụahịa ọnụahịa niile.
Ime Your Research
Mgbe ị na-azụ ugwu ugwu pụrụ iche, karịsịa ebe ọ bụ na ugwu ugwu dị ukwuu ma nhọrọ dị ọtụtụ, ndị nwere ike ịzụta ihe site na mpụga ebe ahụ ga-achọ iwepụ ihe dị ntakịrị tupu ha amalite nyocha maka ihe zuru oke. Ihe abụọ kachasị mkpa bụ atụmatụ mmefu ego na ụdị ebe ị chọrọ ibi ndụ. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ibi nso n'akụkụ ihe ndị dị ka ịzụ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ọgwụ, ma ọ bụ ka agụụ gị dị nso na ntụrụndụ ime ihe ndị dịka njem, ịnya ụgbọ ịnyịnya, ịnya ụgbọ mmiri ma ọ bụ ski? Ndị a abụghị mgbe niile maka otu ebe anyị nwere ọtụtụ obodo nwere ma ihe eji eme ihe n'oge a na ebe ntụrụndụ dị nso. Ị ga-achọ ikpebi nha ụlọ ahụ ịchọrọ, gụnyere ọnụ ọgụgụ nke ime ụlọ ihi ụra na ime ụlọ ịwụ.
Mgbe ị na-azụ ugwu ndị pụrụ iche, ọ dị otu ụdị obodo ị ga-achọ ibi? Anyị nwere ọtụtụ dịgasị iche iche n'ugwu ebe ndị obodo na-elekwasị anya n'ihe omume ntụrụndụ dị ka ịgba ọsọ, gọlfụ, onye ọrụ nchịkọta na ịkụ azụ na ịkwọ ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri. E nwere obodo ndị lekwasịrị anya na nkà na ndụ ime mmụọ ma ọ bụ nke zuru oke. Anyị nwere mpaghara akụkọ ihe mere eme na ebe ndị ọgaranya nọ. Ihe ọzọ ị tụlere bụ ego ala ị chọrọ. Tụlee ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibi n'obodo ma ọ bụ obodo dị nso na ndị agbata obi gị, ma ọ bụ na ime obodo.
Ndị a bụ naanị ihe atụ nke ụfọdụ n'ime isi ihe ndị na-azụ ahịa ga-achọ ịtụle tupu ịmalite ịchọ ụlọ. Ozugbo i nwere ezigbo echiche nke ihe ị na-achọ, ọ bụ oge ịkpọtụrụ onye na-elekọta gị maọbụ malite ịchọ ntanetị. Na mgbakwunye na nke anyị onwe anyị pụrụ iche "Nchọta ..." ndepụta, anyị ejikọtara ọnụahịa nke ihe niile ederede pụrụ iche na ugwu ugwu, n'otu ebe, na anyị website.
Anyị na-enyocha ihe onwunwe ọ bụla edepụtara n'ugwu ma mata ndị anyị ga-ede dị ka ndị pụrụ iche. Anyị na-emezi ha site n'ụdị na ụdị na hazie ha maka ndị na-azụ ihe iji nyochaa na SpecialFinds.com. A na-ahazi ihe ndị a n'ime edemede ndị a: Abanye na Njirimara Rustic, Njirimara Akụrụngwa, Mmiri Mmiri ma ọ bụ Njiri Mmiri, Njirimara Inyinya na Ugbo, Modern Green Eclectic Houses na Luxury Homes and Estates.
SpecialFinds.com bụ naanị ebe ndị na-azụ ahịa ga-achọta ihe ọ bụla e kenyere ederede n'ugwu na-enweghị ike ịbanye site na njigide nke ihe onwunwe nkịtị hụrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere. Anyị nwere ike ịkọ site na netwọk weebụ anyị na ndị na-azụ ahịa ga-aga na saịtị ahụ, mgbe mgbe ha na-anọ ruo ọtụtụ awa, na-enyocha site na iche iche ihe onwunwe.
Chọta ihe omuma ugwu anyi
In Uncategorized, Ịzụta Ụlọ Nanị, Ahịa Njirimara Marketing
Ihe September 1, 2018
Inweta ụlọ obibi pụrụ iche bụ ahịa ahịa mbụ nke Special "Finds ...".
Anyị na-eji ụzọ dịgasị iche iche ... eche echiche dị iche iche, nye ndị na-achụ nta ụlọ na-enweghị ihe ọ bụla maka ihe ndị anyị na-adịghị ahụkebe.
Mgbe ị na-ere ihe onwunwe pụrụ iche, ndị nwe ụlọ na-achọpụta na ụzọ ahịa ahịa omenala anaghị arụ ọrụ. "Nchọta" pụrụ iche bụ ụlọ ahịa ahịa maka ihe ndị pụrụ iche nke na-ewe ihe okike iji nweta ụlọ ndị pụrụ iche.
Special "Finds ..." bụ ụlọ ahịa ahịa na mgbasa ozi na-enyere ndị nwe ụlọ pụrụ iche aka ka ha nweta ihe ha hụrụ ma rere. Ụlọ ọrụ ahụ na-eji usoro mgbasa ozi ọhụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ahịa na-eme ka ndị mmadụ mara ebe niile ma ruo ndị na-achụ nta ụlọ. Ha na-azụlite mgbasa ozi ahịa ọhụrụ na-emepụta iji nweta ihe ndị dị n'otu na-achọpụta.
Nzọụkwụ mbụ na Pụrụ Iche "Nchọpụta ..." ahịa ahịa bụ iji "jide mmetụta nke ihe onwunwe." Ụlọ ọrụ ahụ na-arụzi akụkọ ogologo ụlọ nke e dere site n'ụlọ. A na-eme ka ụlọ ahụ dị ndụ na ndị na-azụ ahịa na-ebugharị site na akụ site n'ebe ọ bụla ha nọ ka ha na-agụ akụkọ ahụ. Ndị na-azụ ahịa nwere ike iche na ọ dị ka ibi na ụlọ na n'elu ala.
Na-esote, mgbasa ozi zuru ezu na-etinye na mbipụta dijitalụ nke New York Times, Wall Street Journal, Robb Report, Mkpokọta ụwa, DePont Registry, na n'elu mbipụta mba 120 nke na-anọchi anya mba 60, gụnyere Asia, Europe, na Middle East. A na-ekegharị ma na-eji HD video tour na Google Earth video-adabere ma jiri ya na mgbasa ozi niile nakwa na LinkedIn, YouTube, Facebook, na ndị ọzọ na mgbasa ozi.
A na-etinye ụlọ ọ bụla na weebụsaịtị "Weebụ ...", nke nwere mba na mba ụwa nke ndị na-azụ ihe onwunwe pụrụ iche. A na-asụgharị peeji niile n'asụsụ nke onye na-agụ. Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahịa ịzụ ahịa dị mkpa iji nweta ụlọ ndị pụrụ iche!
Brenda Thompson, Pụrụ Iche "Chọtara ..." Onye guzobere, Onyeisi, na CEO bụ Director nke Ahịa na New York Stock Exchange tupu ịbanye ụlọ ọrụ ụlọ akụ na 1991. O hiwere Special "Finds ..." na 1995 ma lekwasị anya naanị n'ahịa ahịa dị iche iche ma na-ere ụlọ ndị pụrụ iche. Ọ na-eji ahịa ahịa mgbe mgbe ọ malitere ntọala ahụ.
Thompson kwuru, sị, "Ụlọ ọ bụla m nweburu nwere ihe pụrụ iche, site na ọnụ ụzọ ámá nkume dị na Hudson River na New York ka a na-ede akwụkwọ ma ọ bụ ebe a na-amị osisi nke nwere karama akpụkpọ anụ na-agbanye na mgbidi dị na North Carolina. Mgbe m dị njikere ire, naanị nhọrọ m bụ ịdabere na ụlọ akụ ala. Achọpụtara m ngwa ngwa na ha enweghị nkà ahịa ahịa na ahịa ahụ bụ ụlọ pụrụ iche na oké osimiri nke ndị kuki-cutter bụ otu ụzọ ntinye maka ọdịda. Mgbe ahụ, m tọrọ ntọala Special "Finds ..." iji mejupụta mkpa maka ahịa ahịa na ahịa na-ereghị na ụlọ ọrụ ụlọ akụ. "
"Nchọpụta ..." pụrụ iche bụ ụlọ ahịa ahịa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka ịzụ ihe ndị pụrụ iche. Onye isi na North Carolina, Special "Finds ..." na-amalite ma na-ere ahịa na mkpọsa mgbasa ozi maka ihe ndị pụrụ iche na United States na gburugburu ụwa. Ụlọ ọrụ ahụ bụkwa ụlọ ọrụ na-ere akwụkwọ ikike dị na North Carolina na Pennsylvania ma na-anọchi anya ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa na azụmahịa ha pụrụ iche na mpaghara ndị ahụ.
Hụ àgwà anyị pụrụ iche maka ire ere.
In Ịzụta Ụlọ Nanị, Ahịa Njirimara Marketing
Ihe August 13, 2018
Kedu nhọrọ kachasị mma maka Ọdọ Mmiri Ọdọ Mmiri?
N'oge na-adịbeghị anya, ndị nwe otu n'ime ụlọ obibi ndị a magburu onwe ha nke ụlọ ọrụ anyị kpebiri ịchọpụta iji dochie mmiri vinyl liner nke mmiri ọdọ mmiri ha na-ekpo ọkụ iji gbasaa oge a ga-eji mmiri ahụ mee ihe. Ndị na-ere ahịa na-eleba uru ndị dị na ịhọrọ ụdị mmiri na-ekpuchi mmiri, dị iche iche na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ.
Ebe a na-anọdụ n'ugwu nke ọdịda anyanwụ North Carolina na nnukwu ụlọ akwụkwọ mahadum nke Sylva. Ọ dị ihe na-erughị otu awa n'ebe ọdịda anyanwụ Asheville, na dị ka Asheville, ụlọ a nwere oge ezumike anọ - obere oge oyi, ogologo mmiri dị ọkụ, obere okpomọkụ na ọkọchị ọkụ.
Ndị na-ere ákwà nwere nnukwu ezinụlọ. Ụmụaka na ụmụ ụmụ bụ ndị ọbịa na-abịakarị ma na-etinye oge dị ukwuu n'ime ọdọ mmiri. N'ịchọ ha maka agba mmiri dị iche iche na-ekpuchi mmiri, ha chọpụtara ihe ndị bara uru na ndị na-eso ụzọ:
Ịdị ọcha - Igwe na-ekpuchi mmiri ọdọ mmiri ga-egosiputa aja ruru. Ihe na-acha uhie uhie nke ha na-adịbu na-adịkarị ncha, ma akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ unyi n'ime ọdọ mmiri mere ka ọ dị ncha, karịsịa dị ka nsị dị n'okpuru mmiri ahụ dị elu.
Okpomọkụ - Otu n'ime uru kachasị mma maka agba agba mmiri na-agba ọchịchịrị ọ bụ na ọ na-etinye okpomọkụ site na anyanwụ ma ọ bụghị na ha na-egbuke egbuke na-acha odo odo n'oge ochie.
Ego ego - Mmiri a nwere ihe ọkụkụ gas ọhụrụ kama n'ihi nnukwu agba mmiri na-ekpuchi mmiri, ọ naghị ejikarị ọkụ ọkụ mgbe niile ma na-ebelata ikuku gas!
N'okpuru ala, ha hụrụ ọhụụ na-acha mmiri ọdọ mmiri ọhụrụ. N'ụzọ dị mma, ọdọ mmiri ahụ jikọtara nke ọma na mpụga ụlọ. Ọdọ mmiri ahụ na-adọrọ mmasị ma na-enwe ahụ iru ala karị!
Mụtakwuo banyere ụlọ a na ihe onwunwe dị ịtụnanya nke dị ugbu a maka ire ere maka $ 865,000:
In Ahịa Njirimara Marketing
Ihe July 22, 2018
Atụmatụ maka ịzụta Ụlọ Metaphysical
n'ire metaphysical ụlọ nwere ihe ịma aka ndị pụrụ iche. E nwere ụlọ dị n'ụwa a nwere ọkpụkpọ pụrụ iche. Ugboro mgbe, ebe a na-enweta ihe onwunwe ahụ ruru onye nwe ọhụrụ ahụ. A na-adọta ndị na-azụ ihe na mgbasa ozi maka ihe onwunwe ma echeghị njikọ na ọnọdụ ahụ. Mgbe onye ziri ezi ziri ezi na-abịa, ọ dị mkpa ka ha kwe ka ha "jikọọ" kama ịmanye ma ọ bụ ịkwanye maka inyefe.
Nke a bụ ọnọdụ ya na otu n'ime Nkọwapụta "Nchọta ..." anyị nwere 1192 Rabbit Skin Road na Waynesville. Ụlọ a nwere akụkọ ihe mere eme nke 'ịchọta onye nwe ya ọzọ'. N'afọ ndị gara aga, ihe onwunwe a enwetawo ọhụụ zuru ụwa ọnụ. N'oge ọ bụ nwata, ọ bụ ụlọ nke onye mmụọ, onye edemede na onye na-asụ asụsụ bụ Greta Woodrew. Na-arụ ọrụ dịka ụlọ ahịa nke ndị ụlọọrụ Space Technology na Research Foundation (STAR) mere ka ọ nwee ọtụtụ ndị ọbịa si gburugburu ụwa. Ugbu a, a na-eji ya dịka ebe obibi nke onwe, ezinụlọ. Ndị nwe a hụrụ ala ahụ na nrọ ma chee na ọ dị ike dị otú ahụ na ha si na Florida kwaga - enweghị ajụjụ a jụrụ! Ha mechara chọpụta na na 23 acres bụ ndụ na-agwọ ọrịa mkpuchi na vortex na ha nwere ike ịmeghe.
Mgbe ị na-ere ụlọ dị iche iche, ọ dị mkpa ịmara na ihe nile sitere na ike na site na ilekwasị anya na "mmetụta" na ihe onwunwe ahụ na-enyefe, ịnwere ike ịhapụ ụlọ ahụ ka ọ nweta onye nwe ya.
Ọ bụrụ na ị nwere akụrụngwa nke ị kwenyere nwere oku pụrụ iche, ọ bụrụ na a gwọrọ gị ma ọ bụ ndị enyi ma ọ bụ bụrụ onye ahụike na ịga na nke ụlọ gị, ịnwere ike ịnweta ụlọ atụ!
Ịkpọ òkù dị elu ịchọta onye na-azụ ihe na-esote nwere ike inyere aka. Na-agagharị n'ala, na-anọ jụụ, na-atụgharị uche ma hụ ọhụụ pụrụ iche ọ bụla. Ihe onwunwe gị nwere mkpụrụ obi nke nwere ike ịdị adị n'ihu gị. Gbanye n'ime ya site na ige nti na mmetụta.
Ịzụta ụlọ dị iche iche nwere ike ịchọkwu oge ma si otú ahụ, ndidi. Ghọta na ihe nrịba ama nha anya ka onye nwe ozo bia!
Ihe April 14, 2018
Tupu na Mgbe - Ịchọta Ụlọ Kwadebere Ịgha
Ịkpọ oku nchịkọta dị oke mkpa iji mee ka ụlọ gị dị njikere ire. Iji meziwanye ohere ị na-ere ihe onwunwe gị ngwa ngwa, ma mee ka ụlọ gị pụọ na igwe mmadụ ahụ, ọ dị mkpa na tupu ị kpọọ Realtor, ị na-etinye oge na-elekwasị anya na mkpesa nke ụlọ gị ka ị ghara ire. Akụkụ buru ibu nke "Mkpebi Ịzụta" nke Onye Ọzụahịa na-eme n'oge obere sekọnd na ala gị. Onye na-azụ ahịa ga-achọpụta ngwa ngwa iwepụ akwụkwọ mkpesa. Jide n'aka na ha na-enweta mmetụta dị ukwuu site ná mmalite. Lelee ụlọ gị na ihe onwunwe gị ka onye zụrụ ga-ahụ ya.
Nzọụkwụ 1: Mkpuchi nchịkọta - Mbanye ruo n'ọdụ gị
Rịba ama otú ihe onwunwe gị si egosi na - - "Mkpuchi Mkpuchi", ma ọ bụ, ọ bụrụ na onye na-azụ ihe ga-abata n'ụkwụ, lee anya na ọnọdụ ahụ. - Ndi uzo oyomde idozi? - Ọ bụ mbadamba nkume ahụ? - E nwere osisi ndị dị mkpa ka ọ bụrụ nkụ ma ọ bụ osisi ndị nwụrụ anwụ? - Ị nwere ngere nke gbajiri, ma ọ bụ igbe nkwụnye ma ọ bụ mebiri emebi?
Kwụpụ 2: Na-aga n'ụlọ, na ntinye isi gị.
- Ihe mgbidi gị ọ dị mma? - Enwere mkpọ osisi ahịhịa? - Ọ dị mkpa ka ọnụ ụzọ ahụ dị mkpa ka eserese ma ọ bụ rụzie? - Ndi nwughari na-agbanye ma na-agbada? Ịtinye osisi ma ọ bụ okooko osisi dị iche iche ka ị ga-abanye ma ọ bụ steepụ mgbe niile!
Nzọụkwụ 3: Mepee ọnụ ụzọ ma lee n'ime.
- Mgbịrịgba ọnụ ụzọ ahụ ọ na-arụ? - Ọnụ ụzọ mechibidoro ma kpughee ngwa ngwa? - Ọnụ ụzọ ahụ ọ na-akụ? - Ndi windo n'onu uzo ma obu gbara ya onu ocha? - Ihe nbata nke ala, ala ma ọ bụ akwa dị ọcha? - Lelee elu - enwere ebe a?
Nzọụkwụ 4: Na-aga n'ụlọ gị
- Ndi windo na ala di ocha? - A ga-agbaji olulu isi, ihe ejiji dọọ. Ụlọ dị iche iche kwesịrị ịnụ ísì ọhụrụ - ọ dịghị anụ ma ọ bụ na-ese anwụrụ! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye ego n'ime igwe ionizer iji kpochapụ ísì.
Nzọụkwụ 5: Jiri ndepụta ndebanye n'efu m
Jiri ndepụta dị ka ihe ndị na-esonụ, malite n'èzí ma rụọ ọrụ n'ime. Ihe na-emebi ihe ị na-ahụ n'ime ụlọ ọrụ, ma ọ bụrụ na e kenyere onye ọ bụla ka ọ rụchaa ya. Ozugbo i mechachara ihe niile - site na iwepụ akwụkwọ mkpesa gị, na mgbe ịmechara ihe ndị ọzọ niile iji mee ka ụlọ gị dị njikere ire ere, ihe onwunwe gị kwesịrị ịdị mma nke na ị nwere ike inwe echiche abụọ banyere ire. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ọ bụ oge ịkpọ onye Realtor gị! download Pụrụ Iche Na-achọta Ndepụta Ntupụta Ụlọ Dịka PDF
In Asheville NC Ala
E nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọhụrụ na Asheville NC. Otú ọ dị, ihe kachasị iche bụ nke a ma ama Biltmore Ala, nke asatọ n'ime Ụlọ Ọrụ Na-amasịkarị America site American Institute of Architects, ma na-anọdụ na ụfọdụ 8000 acres.
N'ịbụ ndị na-ere ụlọ ọhụrụ dị iche iche na Ashville na Hendersonville NC kemgbe 1995, amaara m nke ọma ụdị ntụrụndụ, pụrụ iche, ihe dị iche iche dị egwu na mpaghara ahụ.
Lelee map a iji hụ ógbè ndị gbara ya gburugburu.
Buncombe County - ebee Asheville dị;
Henderson County - n'ebe ndịda na n'ebe ọwụwa anyanwụ na obodo quaint nke Hendersonville;
Haywood Na County - n'ebe ọdịda anyanwụ, nke dị ebube Waynesville, nanị 20 nkeji si Asheville;
Madison County - ya na ndi oru ugbo na ndi oru ugbo Marshall na Mars Hill;
Polk County - ya na mba nke Tryon;
Transylvania Na County - obodo mara mma nke kọleji Brevard, na n'elu 250 waterfalls!
Yancey County - n'ebe ugwu na n'ebe ọwụwa anyanwụ, na Burnsville;
Ekwesighi ịkwọ ụgbọala na Asheville ka ịchọta ihe ndị pụrụ iche. Otu ihe dị otú a dị na Waynesville. Aha onye "nweghachi" site na onye nwe ya, ụlọ a na 326 na-ama mkpọtụ okporo ígwè Wolf (ọ bụghị na GPS!) e nyere aha ahụ n'ihi na ọ kwenyere na "ịghachite ihe ị tinyere n'ime ihe".
N'ihe karịrị 5800 square feet, ụlọ a nwere kichin ihe oriri ọkachamara nwere ihe ọ bụla i nwere ike iche n'echiche bụ ọnụahịa $ 300,000 n'okpuru ọnụ ahịa bara uru!
Ụlọ nke oge a maka ire, Ụlọ Mbibi na Ụlọ Egwu, Ụlọ ihe mere eme, Ugbo ala na ugbo, Ugbo Ala, Ụlọ Elu Mmiri ma ọ bụ Ụlọ Mmiri
Ihe January 12, 2018
Ụbọchị ndị a, na-achọpụta otú e si akwụ ụlọ a mma n'ụzọ dị otú ahụ. Ị nwere ike ịchọta ụlọ yiri ya n'otu n'okporo ámá ahụ, ma ọ bụ ọbụna n'otu mmepe ahụ, ma na-emekarị, ị nwere ike ịchọta ihe yiri ya n'ime ebe dị anya. Ụkpụrụ a na-emetụta ọnụahịa nke ihe ndị ọzọ.
Ịchọpụta otu esi akwụ ụlọ a dị mfe maka ụlọ ndị a ma ama, ma ụlọ pụrụ iche nwere ike inwe ihe ọ bụla yiri ya iji tụnyere ya. Ụlọ ndị na-adịghị mma na-anọkarị na nkewa ma ọ bụ mmepe. Mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji ruo ebe dị anya site na mpaghara ịchọta ala yiri nke a maka "Chọta ...".
Maka echiche ndị ọzọ iji nyere gị aka ire ụlọ gị pụrụ iche, gụọ m post: Atụmatụ ịzụta Ụlọ Akụrụngwa
Ihe December 10, 2017
Atụmatụ Ị Pụrụ Iji - Mụta otú e si ere ụlọ
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ pụrụ iche, chee na ị nwere obi ụtọ! I nwere ihe iji kwusaa na ihe ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị enwe. Jiri ihe onwunwe gị iche iche iji mee ka ọ pụọ na igwe mmadụ. Jiri ihe di n'okpuru a iji mezie atụmatụ gi ma m uzo esi ere ulo puru iche.
Otu n'ime Obi
Mgbe ị na-ere ihe onwunwe pụrụ iche, mara na uru dị n'ime inwe ihe dị iche iche. Hụ na ị ga-egosipụta àgwà niile dị iche iche na ahịa nke ihe onwunwe ma ghara ịhapụ oge na ego n'ịgbalị ịzụ ndị na-azụ ahịa nkịtị ndị na-adịghị achọ ihe pụrụ iche ma ọ bụ ihe ọhụrụ. M ga agba ndị na-ere ákwà ume ka ha jide n'aka na onye ọrụ ha nwere atụmatụ na ha ga-azụ ndị ahịa na-achọ ihe onwunwe pụrụ iche.
Kedu Ka I Si Ahịa Ụlọ Gị?
Otu n'ime ihe mbụ ndị na-ere ihe pụrụ iche na-achọ ịmata bụ: "Olee otu m ga-esi akwụ ụgwọ ụlọ m?" Ịkwụ ụgwọ ihe onwunwe pụrụ iche abụghị otu ọnụahịa nke ihe onwunwe na agbata obi ma ọ bụ nkewa ebe e nwere ike ịchọta ahịa dị ka nso nso.
Iji chọpụta ahịa zuru ezu dị ka ihe onwunwe, anyị na-enwekarị ịgbatị ebe anyị na-achọ ebe dị anya. Na ilekwasị anya na ihe ndị dị iche iche, anyị kpochapụrụ ndepụta niile pụrụ iche n'ahịa anyị ma nye ya dị ka akụ maka ndị na-azụ ahịa site na weebụsaịtị Wepụ anyị.
Anyị nyochaa njirimara pụrụ iche ka ha na-ere, ma nwee nchekwa data nke ụlọ ahịa pụrụ iche anyị nwere ike iji maka nyocha nyocha. A gwara ndị na-ere ákwà ka ha jide n'aka na ndị na-elekọta ha nwere ike igosi ụdị ọrụ ịzụta ọnụahịa, na-echebara ihe ndị pụrụ iche, na ihe ịma aka n'ịchọta ahịa yiri ya.
Ọnụ Ahịa Na-enweghị Atụ
Azuhie zuru oke nke ndị na-ere ákwà bụ itinye aka n'ịkwụ ụgwọ ọnụahịa na-enweghị atụ, na-ekwenye na ha na-ekepụta ohere maka mkparita uka na na ha nwere ike belata ọnụahịa mgbe e mesịrị ma ọ bụrụ na ndepụta ahụ adighi adọta ndị na-azụ ahịa. Ọ bụ ezie na ọ siri ike iji guzosie ike ịzụ ahịa ahịa maka ihe onwunwe pụrụ iche, ndị na-azụ ahịa na-amụtakwu karịa oge gara aga ma ọtụtụ oge nwere ike ịchọta na a na-akwụ ụgwọ ụlọ dị mma karịa ọnụahịa dị mma.
Ihe kachasị pụta bụ obere ọnụ ọgụgụ ngosi ma ọ bụ ihe ngosi ọ bụla, enweghị onyinye, ya mere, ọ dịghị mkparịta ụka. Atụmatụ a na-atụ aro ya bụ ịtụle ihe onwunwe ahụ n'ụzọ dị mma, na-adọta ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị na-azụ ahịa nwere mmasị.
Ndị na-azụ ihe mmetụta uche
E nwere ndị na-azụ ahịa na-achọ ihe ndị pụrụ iche, na ndị na-ere ahịa chọrọ ijide n'aka na ha na-adọta ndị zụrụ ahịa maka ihe onwunwe ha pụrụ iche. Ndị na-azụ ihe pụrụ iche na-azụta na mmetụta uche, n'ihi ya, ọ dị ha mkpa ibu ụzọ jikọọ aka na ihe onwunwe ma ha ga-atụle eziokwu. Ndị na-ere ihe ndị a ga-achọ ịrụ ọrụ na onye ọrụ nwere ike ịkọwapụta àgwà pụrụ iche nke ihe onwunwe ahụ nwere ike ịzụta ya.
Jiri Akụkọ Na-eweta Ndụmọdụ
Anyị na-eji akụkọ dị na ndepụta anyị iji mee ka ihe ndị ahụ baa na ndụ ka onye na-azụ ya nwee ike "n'uche" mmetụta ọ ga-adị ka ibi na ya ma nọrọ na ya. Ọ na-amasị m iweta ọtụtụ mmetụta dịka m nwere ike ịbanye na mgbasa ozi - ihe ị na-ahụ - ala nke agba mmanụ; ihe ị na-anụ - ụgbọ okporo ígwè sụgharịrị n'ebe dị anya; ihe ị na-eche - dị jụụ ala. ihe ị na-esi ísì - ahịhịa na-amị mkpụrụ. Achọrọ m ịkọwa ihe onwunwe ahụ ka onye na-azụ ya nwee ike ịnata akụkọ banyere ebe ahụ. Ahịa ahịa kwesịrị iche echiche ịzụ ndị na-azụ ahịa na ihe onwunwe site n'ebe ọ bụla ha nọ ka ha na-agụ akụkọ ahụ. Anyị na-anwa ime ka ha nwee mmetụta nke ihe yiri ya mgbe ụlọ ahụ na nkọwa ahụ ghọrọ ebe obibi ha.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ abụọ nke akụkọ m jiri mee ihe maka mgbasa ozi maka iche iche ụlọ.
Dị ka a ga-esi na-eru maka kpakpando ndị dị n'elu, egwú jupụtara ohere. "Gbanụ ya niile, ọ dịghị onye ga-anụ olu anyị!" Ha wee ... ha wee gbaa egwú. Ndị enyi a na-akpọ, na 17 nkeji oge na-aga, ha zutere ha na ime obodo maka nri abalị. Apogee, na onye nlekota oru 3950 ', bụ ebe dị elu dị elu Ashville. Na nzuzo na 75 mile mile, ọ na-anọdụ na 14.6, arụmọrụ dị ala, nke kachanụ acre, na-ekerịta oke ala .25 na Blue Ridge Parkway. Na 6420 sq. Ft., Enwere echiche site na ụlọ ọ bụla. Ọtụtụ porches & decks ịkpọ oriri ma ọ bụ echiche. Ụfọdụ n'ime njedebe dị elu na-agụnye ndị na-ahụ maka nchịkwa 2, ndị na-esi ísì ụtọ n'oge okpomọkụ, Nest Ntu maka ikiri kpakpando; 2-akụkọ, nkume awụlitere, ọkụ ọkụ na-ere ọkụ, nnukwu kichin, ebe a na-eme nke ọma na ebe dị jụụ, ikpo nkụ na ọkụ na-egbukepụ egbukepụ, ụda ụda dị mma na ụlọ mposi jikọtara iji tinye ihe elu. Obodo ọkụ dị na Asheville dị egwu.
"Ebe Old Allison - 70 Acres"
Kwa Sunday, ndị mmehie, na ndị nsọ gosipụtara n'ụlọ nne mama m Allison. Enweghị ọkpụkpọ òkù, ọ dịghị ụkọ nri - eghe e ghere eghe, poteto ndị na-esi ísì ụtọ na ọkpụkpụ, okra fried, na ihe ndị ọzọ. Eji kichin jupụta, ma anyị niile na-esi na oven na-ekpo ọkụ. Ekpere, ma kesaa efere - niile agakwaghị. Ụmụaka n'ebe niile, na-amanye ọnụ ụzọ, na-ezo n'ime ụlọ ihi ụra elu na ala. N'ime nnukwu ọba, ndị mmadụ na-atụle anụ ụlọ, na mgbe ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị ga-egbutu osisi ọzọ. Ụmụ nwanyị na-ezu ike n'elu oghere e ji akwachie. Pudding Banana maka eji megharịa ọnụ! Ịnọdụ na 70 + acres, na ihe dịka 55 n'ọhịa.
Ndị na-azụ ahịa na-ajụkarị aha anyị site na aha ma ọ bụ site na ihe dị iche iche nke akụkọ ụlọ, kama adreesị. Ha ga-ajụ maka "ụlọ ebe ụmụ asaa ahụ tolitere," ma ọ bụ "ebe ebe ndị ịnyịnya na-echere ụda nke ọnụ ụzọ ụlọ nsị". Ihe na - enye obi ụtọ nke mgbasa ozi anyị na - akọwa bụ na anyị rere anọ n'ime ndepụta anyị nye ndị na - azụ ahịa na - azụ ahịa site na mgbasa ozi n'enweghị onye zụrụ mgbe ọ na - ahụ ihe ndị ahụ ruo mgbe ọ na - abịa na tebụl mmechi. Anyị na-eji foto zuru ezu na vidio vidiyo, ya mere na onye ọ zụrụ nwere njem nlegharị anya. Anyị nwere ndị na-azụ ahịa kwenyere ijide ndị na-ere ákwà na ndị na-adịghị emerụ ahụ anyị ma ọ bụrụ na ha anaghị achọ ihe onwunwe ozugbo ha hụrụ ya, onye nke ọ bụla mechibidoro n'enweghị nsogbu.
N'agbanyeghị ụdị ihe onwunwe, ọ dị mkpa mgbe nile na ụlọ ahụ na-egosi nke ọma, ma n'èzí nakwa n'ime ime. Jide n'aka na ihe onwunwe ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma ma jide n'aka na ị na-edebe ya n'oge ahụ. Dị njikere igosi ihe onwunwe n'oge ọ bụla. Na ihe onwunwe pụrụ iche, jide n'aka na ị dị njikere ịkwaga mgbe ị nwere onye na-azụ ihe. Mgbe onye na-azụ ihe na-abịa ebe ahụ, ọ gaghị abụ mmadụ iri n'ime ha na-achọ ihe onwunwe gị; enwere ike ịbụ otu.
Ndị na-ere ere kwuru, sị:
"Mkparịta ụka nke ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-eme ka m dee na Brenda. Otú ọ dị, o mere ọtụtụ ihe karịa 'ndepụta.' Ọ zutere anyị ka anyị dọọ ntọala maka otú ọ ga-esi mee ụlọ a. O meziri oge na ihe onwunwe ahụ iji mee ka ya nwee ike ide akụkọ banyere ụlọ nke ga-ezipụta àgwà ya pụrụ iche nye ndị na-azụ ihe. Onye na-azụ ya bịakwutere ya ka ọ rụọ ọrụ dịka onye na-elekọta mmadụ abụọ. Brenda na onye nnyemaaka ya nyere aka ma onye na-azụ ya na onye na-ere ahịa ka ọ gaa n'ihu usoro ahụ ma bụrụ ezigbo mmekọrịta mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike na site na mmechi ...... nke mere n'ime ọnwa 2 nke nzukọ mbụ anyị! "
"Ihe ọmụma m banyere Brenda dabeere ọ bụghị nanị na nkà ya kama ọ dị mkpa karịa àgwà ya. Ọ na-ege ntị n'ihe m ga-ekwu, wee zaa ya. Ihe m na-anụ anaghị amasị m mgbe nile, ma amaara m na ihe ndị ọ na-ekwu bụ eziokwu. Brenda nwere ezigbo obi. Ọ ghọtara otú otu onye nwere ike isi ghọọ ihe onwunwe na ụlọ ọ na-ejikọta ihe mgbakwunye ahụ na nkwanye ùgwù. Onye ọ bụla nwere ike depụta ihe onwunwe ma ọ bụghị ndị niile dị njikere ime ihe ndị dị mkpa iji gosipụta na ire. Mee onwe gi amara. Malite na nke kacha mma. A pụrụ ịgụ Brenda ka ọ rụọ ọrụ siri ike iji nweta ọrụ ahụ. "
Ntak-etinye oge gị na-amụta otú e si ere ụlọ pụrụ iche. Anyị bụ ọkachamara ahịa ahịa. Ka anyi nyere gi aka!
Ihe November 9, 2016
Nwee Uwe Owu Ndụ ma ọ bụ Oko Na - ekpuchi | Ndụ na-adịgide adịgide
Echiche nke na-eto eto n'elu ụlọ na-adịwanyewanye na United States ma na-adị ndụ n'elu ụlọ abụghị echiche ọhụrụ.
Ụlọ dị ndụ ma ọ bụ ụlọ elu na-acha ndụ ndụ bụ nke nwere ala akwa nke na-enye ahịhịa ndụ, nke zuru okè maka ahịhịa ndụ, okooko osisi, osisi ma ọ bụ ubi akwukwo nri.
Ha abụrụ akụkụ dị mkpa nke ịkepụta na mba Europe maka ihe karịrị afọ 60. Mba ụfọdụ achọpụtawo uru ha bara ruo n'ókè nke ịchọ ka ụlọ elu ọ bụla dị elu na-eto ụlọ dị ndụ.
Ịzụta Ụlọ Nanị
Asheville NC Ala
Ịzụta Ụlọ Pụrụ Iche
Ahịa Njirimara Marketing